Tonka Online | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Barnaamijyada Waxbarashada Sare ee Dugsiga Hoose
Maamuusta / Meelaynta Koorsada Dedejisa
Sayniska Kombiyuutarka & Koodhinta
Caafimaadka & Fayo-dhowrka Dijital ah
Barashada Luuqada (K-5)
Barashada Luqadda (6-8)
Barashada Luqadda (9-12)
Kooxda Dugsiga Hoose
Kahortagga Xoog u sheegashada OLWEUS
Qoyska Carruurnimada Hore Ed (ECFE)
Ed Gaarka ah ee Carruurnimada Hore (ECSE)
Jr. Sahamiyayaal Daryeelka Carruurta
Dugsiga barbaarinta ee Minnetonka
Dugsiga Hoose (K-5)
Iskuxirayaasha Shabakadaha Hoose
Ikhtiyaarrada Quusin (K-5)
Daryeelka Dugsiga Kahor iyo Kadib
Khariidadda Degmadda (waxay u furan tahay daaqad / tab cusub)
Dugsiga Sare (9-12)
Meelaynta Horukacsan (AP)
U-qalmitaanka & Ballanqaadyada
Mentors xirfad leh
Baccalaureate-ka Caalamiga ah (IB)
Daraasaadka Caalamiga ah
Shaabadood Laba-luqadood iyo Shahaadada Aqoonta
Cilmi baarista Minnetonka
Ku saabsan Cilmi baarista Minnetonka
Dood Cilmiyeed Minnetonka
Mashaariicda Ardayda ee Minnetonka Research
Mashruuca Hogaamiya Jidka
Diiwaanka Skipper (Katalogga Koorsada)
Barnaamijka Bartayaasha Luqadda Ingiriisiga
Sayniska Qoyska & Macaamiisha
Quusin (Shiine iyo Isbaanish)
Hal-abuurnimo iyo Hoggaamin
MOMENTUM (Waxbarashada Teknolojiyada)
Liiska Koorsada ee Tonka Online
Naqshadaynta + Suuqgeynta
Suxufiga Dijital ah
Martida Booqashada Goobta
Websaytka MHS oo Buuxda (wuxuu ku furmayaa daaqad cusub / tab)
Abaalmarinta Bradley G. Abaalmarinta Sare ee Waxbarshada Dugsiga Hoose
Charlie Parnell Award Award for Excellence in Waxbarashada Gaarka ah
Wanaagsan ee Barista
Wanaagsan ee Barida E-Learners
Abaalmarinta Kooxda ee Wadashaqeynta Carruurta
Abaalmarinta Mutadawiciinta iyo Ganacsiga ee MCE
Dadka waaweyn iyo Carruurta Naafada ah
Qoysaska iyo Carruurta
Guri iyo Guri la'aan
Muwaadiniinta Waayeelka ah
Hobolada Fasalka Saddexaad
Fanaaniinta afraad, shanaad iyo lixaad
Diiwaangelinta (wuxuu ka furmayaa daaqad cusub / tab)
Tonka Tartanka Alpine
Wiilasha Tonka Tennis
Gabdhaha Tonka Golf
Tonka Gabdhaha Tonka
Bandhigga Waxqabadka MHS
Kooxda 'Chonet Minnetonka' (wuxuu u furmayaa daaqad cusub / tab)
Minnetonka Band (wuxuu u furmayaa daaqad cusub / tab)
Mashruuca Dhaxalka Minnetonka
Minnetonka Orchestra (wuxuu ku furmayaa daaqad cusub / tab)
Tiyaatarka Minnetonka (wuxuu ku furmayaa daaqad cusub / tab)
Hadafka, Caqiidooyinka iyo Aragtida
Hufnaan iyo Haysasho
Himilada 2aad: Hufnaan iyo lahaansho
Manhajka iyo dib u eegista siyaasada
Gudiga lahaanshaha ardayda
Warbixinta Sirta ah
La xiriirka Gudiga Iskuulka
Kulamada Gudiga Iskuulka
Macluumaadka ku saabsan Guddiyada Degmooyinka
Wax ka qabashada Takoorka iyo Cadaalad darada Jinsiyada
Fariin ku saabsan Qorshaha Dib ugu Laabashada Dugsiga 2020-21
U soo wac dalabyada
Aqoonyahano Sharaf & Shahaadada Gudiga Qaranka
Qoddobo Gorgortan Cutubyo & Koobab Dheef
HR FAQ by jago
Kaydka iyo Bedelka
Guddiga Fayo-qabka Shaqaalaha
Ruqsad siinta Macallinka
Hubinta Tabaruca Asalka
Adeegsiga Xarunta iyo Kirada
Ku saabsan Qado
Qadada Safarka Goobta
Qadada Bilaashka ah iyo Qiima dhimista
Macluumaadka Qadada / Qaadista Macluumaadka
Liiska iyo Qiimaha
Degane iyo Diiwaangelin Furan
Ku saabsan Beesha Minnetonka
Liiska Hubinta Qoyska Cusub
Liiska Hubinta Diiwaangelinta Furan
Maxay Tahay Sababta Isdiiwaangalinta Loo Furay?
Adeegyada Taakulaynta Ardayda
Ed Gaarka ah ee Carruurnimada Hore
Dherer Muuqaal ah
Taageerada Waalidka ee Dheeraadka ah
Kordhinta Fayoobaanta Wanaagsan
Guddiga La-talinta Caafimaadka Maskaxda
Buug-tilmaameedka Fiyo-wanaagga (wuxuu ku furmayaa daaqad cusub / tab)
Barida iyo Barashada
1: 1 Barnaamijka iPad
Awood Sare, Hibo iyo Hibo
Qaab dhismeedka waxbaridda
Booqashooyinka Goobta Aqoonyahan Minnetonka
Tijaabinta iyo Qiimaynta
Shaqaalaha Adduunka ugu Fiican
Khadka Caawinta Qoyska
Tilmaamaha Waalidka Schoology (wuxuu ka furmayaa daaqad cusub / tab)
Xaqiiqada Degdega ah ee Tiknoolajiyadda
Qorshaynta Teknolojiyada iyo Ahmiyadaha Istaraatiijiyadeed
Qiimaynta Hufnaanta Akhriska
Qiimeynta iyo Warbixinta
Lacag bixinta khadka tooska ah (wuxuu ka furmayaa daaqad cusub / tab)
U Gudub Si Aad Ula Socoto Basaska Kale
Xaaladaha Degdegga ah ee Cimilada
Diamond Club (wuxuu ka furmayaa daaqad cusub / tab)
Wada Shaqeynta Qoyska
Ururka Qalinjabiyeyaasha Minnetonka
Qoraayaasha iyo Fanaaniinta
Cusbooneysii Macluumaadka Xiriirkaaga
Kulano & Dhacdooyin
Dib u midoobid
Kuwa Riyada Sameeya
Boutique-ka khadka tooska ah
Lacag la magacaabay
Abaalmarinta Guddiga Brad
Sanduuqa Intl Studies
Sanduuqa Dhaqanka Farshaxanka ee MAA
Nick Duff Sanduuqa Dhaqamada Kala Duwan
Sanduuqa Dhalashada Dhallinyarada
Sanduuqa Cilmi-baarista ee Minnetonka
Deeqda Qoyska ee Sundem
Deeqda Adeegga Gabdhaha Gabdhaha
Fasalka deeqda waxbarasho ee 1964
Naadiga Buug-yaraha 'Skippers'
Liiska Xubnaha / Deeq-bixiyeyaasha
Daqiiqado Kulan Kulan ah
Joogtaynta iyo Awoodda
Fayo-qabka Maskaxda ee Dhallinyarada
Tubaakada, Vaping & E.cigarettes
Cun Hadal. Ku xir!
Tababbarka Amniga iyo Is-difaaca
Garoonka Minnetonka Iibso Lacag Uruurin Leben
Bakhaarka Webka (wuxuu ka furmayaa daaqad cusub / tab)
Barnaamijyada iyo Soo Degsashada
Kaamirooyinka iyo Makarafoonka
Daryeelka iyo Dayactirka
Lumay, La Xaday ama Waxyeello Soo Gaartay
Qaybta 504 Su'aalaha
Barashada Ingiriisiga (EL)
Qorshaha Kajawaabista Coronavirus (COVID-19)
Welwelka Caafimaadka Xaaladaha Joogtada ah
Buugga Adeegga Caafimaadka
Meelaha Kala Guurka
Madadaalada iyo Wakhtiga firaaqada
BARO Barnaamijka @ Cargill
Dugsiga barbaarinta ee Minnetonka iyo ECFE
Naadiga Baadhayaasha (Daryeelka Ilmaha)
Clear Springs Hoose
Ku Saabsan Iskuulkeena
Tilmaamaha AZ ee Dugsigeenna
Peachjar - Qalabka Dugsiga (wuxuu ka furmayaa daaqad cusub / tab)
PTO (wuxuu ku furmayaa daaqad cusub / tab)
Liiska Sahayda Dugsiga (wuxuu ka furmayaa daaqad cusub / tab)
Buugga Ardayga (wuxuu ka furmayaa daaqad cusub / tab)
TIPS276 (Warbixinta Takoorka / Xoogsheegashada / Dhibaateynta)
Diiwaanka Wargayska News & Winds
Buugga Waalidka / Ardayga
Damaanad qaadka Ganacsiga
Liiska Sahayda Dugsiyada ee 2020-21
Foomka Dulsaarka PTO
Foomka Amarka Sawirka Dugsiga
Dugsiga Hoose Groveland
Jadwalka Qadada (wuxuu ka furmayaa daaqad cusub / tab)
Lacag ururiyeyaasha PTO
Liiska Sahayda Dugsiga
Iibinta Iskuulka (wuxuu ka furmayaa daaqad cusub / tab)
Sawirka Miisaaniyadda PTO 2019-20
Foomka Lacag Bixinta PTO
Kulamada iyo Xiriirrada PTO
Dukaan Sir ah iyo Boutique Fasax
Webstore (wuxuu ka furmayaa daaqad cusub / tab)
Dugsiga Hoose Sare
U dabaal degaya 50 Sano
Carwo Khayaali ah
Manhaj Dheeraad ah
Raadinta Awoodda Aqoonta ee Minnetonka (Tijaabada ACT / SAT)
Hawlaha iyo Ciyaaraha fudud
Minnetonka Aquatics (wuxuu ku furmayaa daaqad cusub / tab)
Chonet Minnetonka (wuxuu u furmayaa daaqad cusub / tab)
Safarka Goobta Dhismaha Kooxda Fasalka 6aad
Koorsada Koorsada (wuxuu ka furmayaa daaqad cusub / tab)
Macluumaadka Waalidka ee Fasalka 6aad
Website PTA (wuxuu ka furmayaa daaqad cusub / tab)
Quraacda Aqoonta Madaxweynaha
Amarada Sannadka (wuxuu u furmayaa daaqad cusub / tab)
Dugsiga Dhexe Galbeed
Manhajyo Dheeraad ah
Raadinta Awoodda Aqoonta
Safarka Eagle Bluff
Website PTO (wuxuu ka furmayaa daaqad cusub / tab)
Kheyraadka Teknolojiyada ee Waalidiinta Ardayda Dugsiyada Dhexe
Buug-gacmeedka Waalidka-Ardayga (wuxuu ku furmayaa daaqad cusub / tab)
Ku guuleysiga tacliinta
La talinta tacliinta
Kulliyadda iyo Xarunta Shaqada
MHS Drop Off and Pick Up Tilmaamaha
Maalinta Sawirka (wuxuu ka furmayaa daaqad cusub / tab)
Buugga Buugga Aqoonyahannada
Bakhaarka Koodhadhka Skippers
Ogeysiisyada Maalinlaha ah (wuxuu ka furmayaa daaqad cusub / tab)
Xarunta Warbaahinta - Dekedda
Tilmaamaha Qorsheynta Fasalka 9aad
Tilmaamaha Qorsheynta Fasalka 10aad
Tilmaamaha Qorsheynta Fasalka 11aad
Tilmaamaha Qorsheynta Fasalka 12aad
Diiwaanka Skipper (Koorsada Koorsada) (wuxuu ka furmayaa daaqad cusub / tab)
Tilmaamaha Qorista iyo Kheyraadka
Buug-sannadeedka - Voyageur-ka
Qaabka Tilmaamaha Hadda
Diiwaangelinta Ciyaaraha fudud (wuxuu ka furmayaa daaqad cusub / tab)
Hubinta Asalka Tabaruca
My SSO (wuxuu ku furmayaa daaqad cusub / tab)
Erayo fure ah
Ayaa iska qori kara Tonka Online?
Sideen iskaga qoraa koorso qadka ah oo loo maro Tonka Online?
Maxay yihiin waqtiyada kama dambaysta ah ee isqorista?
Ma tuuri karaa koorso Tonka Online ah?
Koorsooyinka Tonka Online-ka ah waxay u adeegaan ardayda dhigata dugsiga sare ee ku kala baahsan Minnesota, oo ay ku jiraan ardayda ka socota Degmooyinka ka baxsan Minnetonka, iskuulada charter-ka, iskuulada gaarka loo leeyahay iyo ardayda dhigata iskuulka guryaha.
Kani waa barnaamij dheeri ah oo kuu oggolaanaya inaad kalabar kalabar casharradaada ku qaadatid khadka tooska ah, adigoo ku sii joogaya degmadaada ama barnaamijkaaga.
Ardayda ka baxsan Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka waa inay raacaan nidaamka dalabka khadka tooska ah .
Ardayda Minnetonka waxay iska diiwaangelin karaan Skyward iyagoo adeegsanaya isla nidaamkii aad u dhigan lahayd koorsooyinka caadiga ah.
Ardayda dhigata Dugsiga Minnetonka School
Ardayda Gudaha-Degmadu waa inay iska diiwaangeliyaan fasallada inta lagu jiro daaqadda diiwaangelinta caadiga ah
Ardayda Minnetonka waa inay la hadlaan la-taliyahooda iskuulka haddii ay rabaan inay isdiiwaangeliyaan ka dib marka la xiro diiwaangelinta Skyward Ardayda Minnetonka wali waxay ku bixin doonaan lacagta Skyward Fee Management.
Ardayda Dibedda ka ah Dugsiga Degmadda Minnetonka
Wakhtiga kama dambaysta ah ee Xagaaga 2020 waa Juun 4deeda
Xusuusin: Waxay kuxirantahay cabirka fasalka, waxaan awoodi karnaa inaan diiwaangelino ardayda waqtigii kama dambaysta ahaa ee lasoo dhaafay, ilaa inta laga ansixinayo. Fadlan emayl u dir tonkaonline@minnetonkaschools.org si aad wax uga weydiiso diiwaangelinta soo daahay.
Taariikho Muhiim ah
Kulamada koorsooyinka waxay la jaan qaadayaan kalandarka Dugsiga Minnetonka.
Xagaaga 2021 wuxuu soconayaa Juun 14 - Ogosto 20
Dayrta Dayrta 2021 waxay socotaa Sebtember 8 - Janaayo 21
Semesterka Jiilaalka 2022 wuxuu soconayaa Janaayo 25 - Juun 3
Xilliga Kama Dambaynta Diiwangelinta
Ardaygu wuu iska dayn karaa koorso aan diiwaan ku lahayn Skyward labada toddobaad ee ugu horreeya koorsada.
Kuwa aan dhammeystirneyn waxaa la siin karaa halkii macallin ee ikhtiyaar u ah ardayda horumarka sameyneysa laakiin u baahan waqti dheeri ah si ay u dhammaystiraan shuruudaha koorsada. Shaqada koorsada waa in lagu dhammeeyaa daaqad laba toddobaad ah. Haddii shaqada koorsada aan la dhammaystirin wakhtigaas, buundada waxaa loo beddelayaa fasalkeedii hore. Tani waxay waafaqsan tahay borotokoolka Dugsiga Sare ee Minnetonka.
Dhibco looma oggola labadii toddobaad ee ugu dambeeyay koorso kasta.
Waa imisa qiimaha Tonka Online?
Dugsigaygu ma bixiyaa khidmadaha ama ma bixiyaa kharashka?
Goorma ayaan bixin doonaa koorsada Tonka Online?
Sideen lacag ku bixiyaa?
Waa maxay siyaasadda soo celinta?
Haddii aad u qaadanaysid koorso Tonka Online ah qayb ka mid ah jadwalka joogtada ah ee ardayga, wax lacag ah lagama qaadayo qoyska koorsada Tonka Online.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad qaadanayso koorso Tonka Online ah oo ah koorso dheeraad ah oo ka baxsan jadwalkaaga caadiga ah (tusaale ahaan, haddii aad leedahay jadwal 6-bilood ah oo aad u qaadatid koorso Tonka Online ah oo ah fasalka 7aad) waxaa jira lacag dhan $ 375 * Koorsooyinka Semester-ka 0.5 (P1 = $ 375 iyo P2 = $ 375) marka laga reebo koorsooyinka Fitness A iyo Wellness B. Iyagu waa midkiiba $ 275.
* Khidmadaha waa la badali karaa.
Markaad dhigato iskuulka dowliga ah iyo Tonka Online waa qeyb ka mid ah jadwalkaaga caadiga ah maalin dugsiyeedka iyo inta lagu jiro sanad dugsiyeedka, wax lacag ah lagama qaadanayo koorsada Tonka Online.
Haddii aad qaadanaysid koorso Tonka Online ah oo aad dhigatid iskuul gaar loo leeyahay ama aad guri ku jirto, waa lacag.
Markaad u qaadanayso koorso Tonka Online ah fasal dheeraad ah ama xagaaga, waxaa jira lacag.
Bixinta ayaa la doonayaa ka hor maalinta koowaad ee koorsada. Waxaa laguu soo diri doonaa xiriiriye toos ah webstore-ka. Ka dib bixinta lacagta la helo, u oggolow 2-3 maalmood oo shaqo inaad ku hesho marinka koorsada. Kadib bixinta lacagta, helitaanka koorsada internetka ayaa la bixin doonaa.
Inta lagu guda jiro Sannad Dugsiyeedka
Qaan-sheegashada iyo faahfaahinta lacag-bixinta waxaa laga soo diri doonaa emayl ahaan Xafiiska Ganacsi ee loogu talagalay cinwaanka emaylka waalidka ee lagu bixiyey Foomka Diiwaangelinta.
Qoysaska Degmada Minnetonka waxay ku bixin doonaan kharashka Skyward Fee Management ama jeeg Bursar ee dugsiga sare.
Qoysaska ka baxsan Degmooyinka waxaa loo diri doonaa qaansheegta Bursar ee dugsiga sare. Macluumaad dheeraad ah oo lacag bixin ah ayaa lagu dari doonaa Warqaddaada Soo Dhaweynta.
Siyaasadda Soo Celinta *
Soo celin buuxda haddii koorsada la joojiyo.
Soo celin buuxda haddii koorsada la joojiyo kahor maalinta koowaad ee koorsada.
Dib u soo celinta buuxda oo ka yar $ 100 khidmadda Maamulka haddii koorsada la dhigo 14ka maalmood ee ugu horreeya (2 toddobaad). Ex. $ 375 khidmadda koorsada - $ 100 khidmadda maamulka = soo celinta $ 275.
Wax lacag celin ah lama bixin doono haddii koorsada la joojiyo ka dib maalinta 14aad.
* Xusuusin: Maalmaha usbuuca waxaa lagu daray xisaabinta maalmaha fasalka.
Maxay yihiin taariikhaha bilowga iyo dhammaadka koorsada?
Miyaan heli doonaa dhibco maadooyinka aan ku qaato internetka?
Immisa koorso ayaan ku mari karaa Tonka Online?
Ma ka heli doonaa macallin ka socda Dugsiga Sare ee Minnetonka?
Sidee wax loo siiyaa koorsada Tonka Online?
Maxay jihayntu qayb muhiim ah uga tahay arday noqoshada Tonka Online?
Waa maxay culeyska shaqada?
Ardaydu ma inay soo galaan maalin kasta?
Ma u isticmaali karaa FitBit-kayga ama raadraaca jimicsiga oo ka duwan Fitness A iyo Wellness B Waxbarashada Jirka ??
Sidee buundooyinka uga shaqeeyaan Tonka Online?
Xagee u aadayaa koorsadayda internetka haddii aan qaadanayo inta lagu jiro sanad dugsiyeedka?
Qoyskeennu waxay safraan xagaaga. Weli ma ka qayb geli karaa Tonka Online?
Haddii aan iska qoro koorso xagaaga ah oo aanan dhammaysan, miyaan ka shaqeyn karaa fasalka dayrta illaa la dhammaystiro?
Ka waran haddii ardaydu su'aalo qabaan ama u baahan yihiin caawimaad?
Haa. Koorsooyinka Tonka Online-ka waxaa loo tiriyaa isla sidii koorso dhaqameed. Ardayda Degmada ee Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka waxay heli doonaan warqad buundo iyo dhibco ah koorsooyinka lagu dhammaystiray Tonka Online ee qoraalladooda.
Koorsooyinka qaarkood (Pre AP Chem, Pre AP Bio tusaale ahaan) ayaa loo heli karaa xisaabinta. Ardayda hubiya koorsada Tonka Online-ka ayaa si buuxda uga qayb gala koorsada, laakiin buundo kama muuqan doonto qoraalkooda, si fudud diiwaanka inay koorsada qaateen.
Inaad noqotid bartaha guuleysta ee khadka tooska ah waxay ubaahantahay waqti iyo u heellan barashadaada. Inta lagu jiro sanad dugsiyeedka, ardaydu waxay qaadan karaan illaa kalabar koorsooyinkooda internetka xilli-dugsiyeedkiiba.
Xilliga kuleylaha, waxaa si xoog leh lagula talinayaa ardayda in aysan qaadan wax ka badan hal koorso sababo la xiriira waqtiga adag.
Haa. Koorsooyinka khadka tooska ah ee Tonka waxaa qaabeeyey oo wax ka dhiga macallimiin khibrad u leh Dugsiyada Sare ee Minnetonka. Taageerada tacliinta waxaa heli kara macallimiintan khibradda leh si shaqsi ah ama shaqsi ahaan ah (haddii aad dhigato Dugsiga Sare ee Minnetonka).
Koorso kasta waxaa si gaar ah loogu talagalay barashada internetka si loo hubiyo in ardayda ay helaan khibrad aan caadi ahayn. Waxaa jira habab kala duwan oo loogu talagalay barashada iyadoo kuxiran koorsooyinka gaarka ah iyo shuruudahooda oo udhaxeeya buugaagta dijitaalka ah, casharrada fiidiyowga, jilitaanka khadka tooska ah, casharrada, aqrinta, guddiyada dooda, iyo su'aalaha Schoology.
Ahaanshaha ardayga khadka tooska ah waxay u noqon doontaa isbeddel bartayaal badan. Hadafkeenu waa in aan siino ilo kasta oo suurtagal ah si aan u taageerno guushaada waxbarasho.
Waxaa jira laba qaybood oo loogu talagalay hanuuninta ardayda ku jirta Tonka Online. Qaybta koowaad waxay ku saabsan tahay arday dhammaystiraya dukumintiyada loo baahan yahay ee lagu sharraxay barta Tonka Online Schoology. Kani wuxuu kuu soo bandhigi doonaa waxyaabaha aad ka filayso inaad tahay qof wax barta ahaan iyo dhammaan foomamka iyo dukumiintiyada lagama maarmaanka ah.
Qaybta labaad ee hawsha hanuuninta waa kulanka ama mid la qabto (sida Skype) ama Dugsiga Sare ee Minnetonka macallinka iyo ardayda kale ee fasalka. Waalidiinta waa lagu soo dhaweynayaa inay kaqeyb galaan kulankaan hanuuninta sidoo kale.
Tani waa su'aal guud oo loogu talagalay ardayda tixgelinaysa koorsada internetka. In kasta oo shaqada koorsada iyo shaqooyinka la qaban karo markay ku habboon yihiin jadwalka ardayga, haddana weli waxaa jira rajo laga qabo shaqo joogto ah dhammaan koorsooyinka. Xeerka guud ee suulka waa qiyaastii 5-7 saacadood usbuucii koorso kasta. PE-da internetka ayaa ka yar, oo leh qiyaastii 45 daqiiqo oo kooras ah (oo aan ku jirin waxqabadyada jimicsiga caadiga ah).
Inta badan koorsooyinka Tonka Online-ka ah waxaa loogu talagalay inay noqdaan kuwa isxilqaama, si kastaba ha noqotee macallimiintu waxay bixin karaan jadwal taariikhi ah iyo jadwal loogu talagalay inay ku sii socdaan wadada. Caadi ahaan, waxaan soo jeedinaynaa in la qaato qiyaastii waqti la mid ah toddobaad kasta oo ardaygu ku jiri lahaa fasalka, saacadaha 5-7, si uu ula socdo shaqada koorsada. Ardaydu waxay dooran karaan wakhti iyaga ugu wanaagsan oo shaqeynaya inta lagu jiro maalinta, taasoo u oggolaanaysa dabacsanaanta jadwalkooda. Ma jiraan wax xaadiritaan maalinle ah, hase yeeshe macallimiintu waxay ogeysiin doonaan ardayda aan sameynaynin horumarka joogtada ah si ay uga caawiyaan inay ku sii socdaan dhabbaha dhammaystirka koorsada.
Haa, nooc kasta oo duubi kara dhaqdhaqaaqa jimicsiga aasaasiga ah, oo ay ku jiraan barnaamijyada casriga ah sida Google ama Apple Health, Garmin, Polar, iyo inbadan ayaa la isticmaali karaa inta lagu guda jiro koorsada. Haddii aad jeclaan lahayd inaad ka fiiriso FitBit dugsiga fadlan mid ka soo qaado Dekedda Dugsiga Sare ee Minnetonka.
Qiimeynta waxay si dhow ula jaan qaadi doontaa fasallada dhaqanka ee Minnetonka, waxayna yeelan doonaan qiimeyn qaabeed iyo mid kooban. Jawaabcelintu waxay noqon doontaa mid joogto ah oo waqtigeeda ku socota dadaal lagu ilaalinayo heerarka sare ee guusha ardayda. Fadlan dib-u-eegis ku sameeya nidaamka qiimeynta ee bogga 8 ee Buug-gacmeedka Ardayga.
Haddii aad dhigato Dugsiga Sare ee Minnetonka, ardayda Tonka Online waxay ka shaqeeyaan Xarunta Warbaahinta inta lagu jiro muddadooda koorsada internetka. Maadaama aysan dadka kale mashquulineynin, dhalinyarada iyo waayeelka loo qorsheeyay fasalka Tonka Online ayaa ka faa'iideysan kara meel kasta oo dhismaha ka mid ah waqtigooda waxbarasho.
Ardayda iska diiwaangelisa Tonka Online ee ka baxsan degmada waxay doortaan boos iyo waqtiga ugu habboon baahidooda waxbarasho.
Haa. Tonka Online kaliya maahan inay bixiso gaari lagu kordhinayo barashada bilaha xagaaga, laakiin sidoo kale waxay bixisaa jawi waxbarasho oo wareega. Waxa kaliya ee loo baahan yahay ayaa ah isku xirnaanta internetka.
Ardayda qorsheyneysa inay safraan oo aan awood u laheyn inay si joogto ah u galaan intarnetka inta lagu jiro waqtigaas waa inay qorshe la sameeyaan baraha ka hor bixitaankooda.
Si aad uga sii mid ahaato shaqada koorsada waa inaadan ka maqnaan qadka internetka wax ka badan hal usbuuc markiiba.
Waad sii shaqeyn kartaa si aad uga fogaato taariikhaha muhiimka ah ee lagaa maqnaado, ama aad kala hadashid waqtiga la hagaajiyay macalinka koorsada.
Maya. Waxaa lagaa filayaa inaad lasocoto koorsada waxaadna dhameystiri doontaa koorsada jadwalka waxaadna heli doontaa darajada aad kasbatay.
Shaqaalaha Tonka Online-ka ah ayaa la heli doonaa inta lagu jiro labada toddobaad ee ugu horreeya si ay uga caawiyaan su'aalaha saadka ee Dekedda Dugsiga Sare, Isniinta - Khamiista 9:30 - 12:30. Dabcan caawimaad gaar ah, habka ugu fiican ayaa ah inaad ku xirnaato macallinka iyada oo loo marayo Schoology.
Su'aalaha Ku Saabsan Barashada Internetka
Sidee buu u shaqeeyaa barashada internetka?
Muxuu iskuullada dadweynuhu u fidiyaa koorsooyin onlayn ah?
Maxaan ugu qaataa koorso internetka ah?
Sideen ugu taageeri karaa ilmahayga barashada qadka
Sidee koorsada khadka tooska ah looga eegi karaa kulliyadaha?
Koorso kasta waxaa hogaamiya macalin Dugsiga Sare ee Minnetonka kaasoo ardayda ku hagta manhajka. Koorsooyinka khadka tooska ah ee Tonka waxay bixiyaan waddo aqoon sare oo shaqsiyan leh oo ujeedadeedu tahay in lagu xoojiyo inaad maamusho waqtigaaga iyadoo lagu siinayo qaab-dhismeed kaa ilaalinaya dhiirrigelintaada iyo wadada aad ku dhammaystiri karto shaqada koorsada.
Manhajka koorsada waxaa kujira qaybo ama cutubyo. Waxaad xoogaa dabacsanaan ku leedahay dhameystirka cutubyada / qaybaha, laakiin waxaa lagaa filayaa inaad la kulanto waqtiyada loogu talagalay. Sababtoo ah shaqada koorsadu waxay u baahan tahay dadaal socda, waxaad u baahan doontaa inaad waqti ku qaadatid ka shaqeynta Schoology ugu yaraan 3-4 jeer usbuucii.
Markaad dhex mushaaxayso cutubyada / qaybaha koorsada, waxaad la macaamili doontaa macallinka iyo ardayda kale jawi iskaashi oo aad u sarreeya oo ay ku jiraan adeegsiga fikirka ah ee looxyada wadahadalka, Google Docs iyo shirarka tooska ah ee internetka.
Ujeeddada Tonka Online ma ahan in la beddelo waayo-aragnimada waxbarasho ee hodanka ah ee ka dhacda fasal dhaqameed, laakiin waa in lagu kabo waayo-aragnimadan fursado cusub oo loogu talagalay ardayda. Hadafkeenu waa inaan siino khibrad heer caalami ah oo heer caalami ah oo ardayda siisa fursado badan oo koorso ah iyo dabacsanaanta kordhinta jadwalka.
Ku noqoshada bartaha internetka ee guuleysta waa xirfad muhiim ah oo ay tahay inay ardaydu bartaan si ay ugu noolaadaan Qarniga 21-aad. Arday badan ayaa qaadan doona koorsooyin khadka tooska ah ah ee kulleejooyinka ama xirfadaha dugsiga sare ka dib oo waxay helayaan iyaga oo aan isu diyaarin guul. Barashada tooska ah ee loo maro Tonka Online waxay kuu oggolaaneysaa inaad la kulanto barashada khadka tooska ah iyadoo la raacayo hagista macallin heer sare ah oo u heellan hubinta guushaada koorsada iyo taageerada barnaamijka aadka u qaabeysan.
Ku dhiirigeli ilmahaaga inuu adeegsado xeelado caawinaad raadsasho haddii isagu / iyadu aanu wax fahmin. Tan waxaa ka mid ah la xiriirida macallinka, weydiisashada waqti ay ku kulmaan inta lagu jiro saacadaha shaqada ama xafiisyada, weydiinta asxaabta si loo caddeeyo, sameynta cilmi baaris si wax badan looga barto, ama dib loogu akhriyo tilmaamaha caddaynta. Si loo abuuro caadooyin waxbarasho oo wanaagsan, ardaydu waa inay dejiyaan jadwal, oo ay u qoondeeyaan waqti aan kala go 'lahayn oo ay xoogga saaraan shaqada koorsada, isla markaana ay si firfircoon uga qaybgalaan asxaabtooda fasalka iyo macallinka. Dhaqan guud ahaan, ardayda waa in lagu dhiiri galiyaa inay ku soo galaan ugu yaraan 3-4 jeer usbuucii Schoology.
Ahaanshaha ku guuleyste bartaha khadka tooska ah waxay ka dhigan tahay in ardaydu ay sidoo kale fahmaan muhiimadda caafimaadka dhijitaalka iyo fayoobaanta . Waalidiintu waxay ka faa'iideysan karaan ilaha bilaashka ah si ay uga caawiyaan dhiirigelinta mas'uuliyadda iyo isticmaalka anshaxa ee tikniyoolajiyadda. Xatooyo xattaa lama aqbali karo waxayna sababi kartaa cilad toos ah oo koorsada ah. Ka caawi cunugaada inuu fahmo halista xatooyada. (Si aad wax badan uga ogaato xatooyada, fadlan booqo Plagiarism.org .)
Dhibcaha lagu kasbaday dhammaan koorsooyinka Tonka Online waxay u muuqan doonaan sida deyn kasta oo kale oo ay ardaydu kasban karaan inta ay ku jiraan dugsiga sare. Minnetonka ma kala soocayo khadka tooska ah iyo koorsada dhaqameed ee ku jirta tusmada ama filashooyinka, sidaa darteed ma jiro farqi u dhexeeya qoraalka ardayga. Xaqiiqdii, ardaydu waxay qaadan karaan ugu yaraan hal koorso oo internetka ah markay sii wataan waxbarashadooda dugsiga sare kadib, sidaas darteed Tonka Online waxay ardayda siisaa fursad weyn oo ay ku horumariyaan xirfadaha barashada internetka.
Hoyga Tonka Online
Liiska Koorsada oo Buuxda
Eeg Webinar 2020
Isku qor Tonka Online
Macalinka Hogaanka Tonka Online
Iskuxirka Iskuulka Dugsiga Dadweynaha Minnetonka s
5621 Wadada Degmada 101 Minnetonka, MN 55345
La wadaag sheeko
© 2021 Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka. Degmo 276. Dhammaan xuquuq dhowran.
Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka /
Dugsiga Sare (9-12) /